Kylian Mbappe oo muuqaal laga soo bandhigay isagoo baranaya luqadda Spanish-ka… (Real Madrid oo mideynaysa Mbappe & Haaland?) – Gool FM
(Munich) 26 Abril 2020. Real Madrid ayaa diyaarineysa qorshayaal hammi ah oo ay ku mideyneyso Kylian Mbappe iyo Erling Haaland oo ay garoonka Santiago Bernabeu ku keeneyso sanadka 2022-ka sida wararku ay sheegayaan.
Da’yarka caqliga badan ee Kylian Mbappe ayaa muuqaal laga soo bandhigay isagoo baranaya luqadda Spanish-ka, markaasoo uu 15-sano jir ahaa.
Labadaan laacib ayaa ah labo ka mid xiddigaha ugu hibada fiican kubadda cagta Adduunka, waxaana mar waliba la arkaa, iyagoo sameynaya waxyaabo ka fiican wixii ay horay u sameyn jireen.
Taa waxaa sii dheer in Mbappe uu leeyahay waayo-aragnimo ku saabsan in qaar ka mid ah erayada Isbaanish-ka uu ku hadli karo, kuwaasoo uu bartay markii uu iskuulka dhiganayey.
Markii uu joogay Monaco isagoo 15-sano jir ah ayaa dhowaan la shaaciyey muuqaal isagoo ku hadlay qaar ka mid ah erayada Isbaanish-ka, taasina waxa ay fududeyn kartaa in haddii uu ku biiro Real Madrid uu si fudud ula qabsan karo dalka Spain.
Hadda waxa ay u muuqataa inuu ku sii adeegsan karo Isbaanishkaas Magaalada Madrid, halkaasoo sidoo kale laga yaabo inuu ku biiro xiddiga reer Norway ee Haaland.